Holloween | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
do not take too much sweets, later ur sugar rate will be high. please control your diet. within your family u r the only one left to enjoying about writing.
အမချိုသင်းနဲ့ ကိုကြီးကျော်တို့အိမ်ကို နိနိသရဲလေး လာခြောက်တယ်။ သကြားလုံးပေးပါဗျို့။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ဆိုလည်း ရပါတယ်ဗျို့။ ၁ ကျပ်ပေးလည်း စိတ်မဆိုးဘူးနော်။ သရဲလေးတွေပေးမည့် သကြားလုံးတွေ အမစားမနေနဲ့အုံးနော်။
မမိုးချိုရေ ရှင်မင်းလဲညနေက သကြားလုံးတွေသွားဝယ်ပြီး
ကလေးတွေကိုစောင့်နေတာ.... တစ်ယောက်မှမလာဘူ :-(
အခုပြောင်းနေတဲ့ apartment ကပေါ်ထပ်မှာဖြစ်နေလို့နဲ့တူပါရဲ့..... မနက်ဖန်မှ ဝယ်ထားတဲ့ သကြားလုံးတွေ ဆိုင်မှာသွားပြန်ပေးရမယ်.. ဟီး
ပိုတဲ့ သကြားလုံးတွေ ဒီကိုလှမ်းပို့ပါ..
ကုန်သွားလဲ ပိုက်ပိုက်ပေးရင် စိတ်မဆိုးတတ်ပါ
ဒီရောက်မှ အားလုံးက ချိုနေတာနဲ့ သကြားလုံးဝယ်ဖို့ မေ့မေ့နေလို့
ဒေါက်ဒေါက် .. ))))
သကြားလုံးပေးပါအုံး အမရေ ...
အမရေ ... ဓာတ်ပုံထဲက ကလေးလေးအိပ်နေတာ ချစ်စရာလေးနော်
သကြားလုံးတွေ အများကြီး စားပြီး အဖွားကြီး မဖြစ်ခင် သွားကျိုးနေမှ တကယ့်ကို သရဲနဲ့ ပိုတူသွားမယ်။ ဟဟ... :P
Original Halloween costume ဆိုတာ..သဘောအကျ ဆုံးပဲ။ ဟိ-
ဟင့်အင်း ချစ်စရာကောင်းနေကြမှာလို့ ယုံကြည်လျှက်
မရေ.. ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ကလေးလေး.. အိပ်နေတာများ..အသည်းယားတယ်..
အမတို့ဆီမှာတော့ Holloween ဆိုပျော်စရာကြီးနော်.. ဒီမှာတော့ သိပ်ပြီး ခေတ်မစားဘူးရယ်.. trick or treat လည်း မလုပ်ကြဘူး.. ကိုယ်မသိတာလည်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
trick or treat?? ၀ူးထွားထွား
ချိုချဉ်ပေးပါဗျို့... treat ပဲလုပ်...
Holloween မှာ ခေါက်ဆွဲခြောက် treat က
ဒါ ပထမဆုံးပဲဖြစ်မယ်း)
မနှစ်က..သူများအိမ်အလည်သွားနေလို့ အိမ်ကို ကလေးတွေလာတာ မကြုံလိုက်ဘူး။
ဒီနှစ်တော့ သကြားလုံးပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်လဲတံခါးအဖွင့်... သူတို့တောင် ပြန်လန့်သွားတဲ့ပုံပဲ။ ဟိဟိ။
Halloween night ကို အကြောင်းပြပြီး...
သားက တော့ကျနော့်ကို အချဉ်ဖမ်းသွားတယ်..မမိုး..။
halloween ညမှာဝတ်ဘို့ ဆိုပြီး စတားဝါးထဲက ၀တ်စုံပူဆာလို့ ဝယ်ပေးရတယ်..။
မနေ့ ညက ၀တ်စုံပြည့်ဝတ်ပြီး ညနေ ၅နာရိ အိမ်က ထွက်သွားတယ်...အိမ်ရှေ့ က ဂျပန်မအိမ်တစ်အိမ်ဘဲသွားပြီး ပြန်ဝင်လာတာ...
သားက ၀တ်စုံဘဲ လိုချင်တာ...တဲ့ ဗျာ...။
Santamonica Blvd., ကိုလာတာမဟုတ်ဘူး။ အရမ်းမိုက်တယ်။ ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်။
စိတ်ပြေလက်ပျောက် သွားလိုက်တာ လူပါပျောက်တော့မယ်...ဟီ...ဟိ.....
ညကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေ တဖွဲ့လာကြတယ်.. အိမ်တံခါးလာခေါက်တာပေါ့
သကြားလုံးတွေပေးလိုက်ပါတယ်. သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ပျော်စရာပဲ
ကလေးလေး တစ်ယောက် သရဲ လာခြောက်တာ ပိုးဥက သဘောကျလို့ရီနေတာ။ သူက ပြောသွားတယ် ကြောက်လည်း မကြောက်ဘူး တဲ့ :D
အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးလေး တွေက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။
ဒီပို့စ်က ဖတ်ပြီးတာကြာပြီ..Sunday မို့ အသစ်များတွေ့မလားလို့ လာချောင်းတာ ဆရာမ
ဟဟ အမ သကြားလုံးရရင်ကျနော့်ကို ပါ ပေးနော်
ဘာအတွက်လုပ်တဲ့အထိမ်းအမှတ်မှန်းကို မသိဘူးဗျ။ သမိုင်းကြောင်းလေးသိရင် လုပ်ပါအုန်း
အဟိ .. ကြောင်ပိုက်ပြီး အမက Halloween ထွက်မယ်ရေးထားတာ ဖတ်ပီး မျက်စိထဲ တမ်းမြင်မိတယ် ။ ရယ်လိုက်ရတား)
ဒါနဲ့ အမ သူငယ်ချင်းရဲ့ သမီးလေးက ချစ်စရာလေး ။
အဲဒီမှာ အကျဉ်းချူပ်တော့ ရှင်းပြထားတယ်။ သွားဖတ်ကြည့်ပေါ့း)
တခွီးခွီး မြည်နေတဲ့ ကြောင်ကလေး မဲကျူတ်ကလေးကို ပိုက်ထားတဲ့ ကြောင် အမေ မအီမလည် ဖြစ်နေတာကို မြင်ယောင် ကြည့်မိတယ်။ :P
နယ်လီလေးက ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာကွယ်။
ဂျစ်တူးနဲ့ တို့ အတွေးချင်းတူနေပါလား။